Isinxibo sommandla waseGalician: Imbali kunye nezinto eziyilwayo | Iindaba Zokuhamba
Isinxibo sommandla waseGalician
ULuis Martinez | 09/09/2021 11:00 | isiko, España
Siyaqonda njani Isinxibo sommandla waseGalician leyo yayisetyenziswa ngamadoda nabafazi kulo mmandla rhoqo ngaphambili. Kuyinyani ukuba le isetyenziselwa imisebenzi yemihla ngemihla ibingafani naleyo isetyenziswe ngeholide. Kwangokunjalo, bekukho iyantlukwano phakathi kwamaphondo ahlukeneyo kwanamabhunga aseGalicia.
Nangona kunjalo, isinxibo sommandla waseGalician, ukusukela kumaxesha amandulo, ukufana okukhulu kunokwabanye abantu baseSpain. Omabini la madoda nabasetyhini ahlala enxitywe iimpahla ezifanayo, nangona kukho indibaniselwano eyahlukeneyo kunye nemibala. Kodwa, nangokunxulumene nale yokugqibela, i austerity kunye umbala omncinci owahlukileyo kuzo zonke. Ngayiphi na imeko, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nesinxibo sommandla waseGalician, siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Imbali encinci yempahla yesithili saseGalician
2 Isinxibo sommandla waseGalician wabasetyhini kunye namadoda
2.1 Isinxibo esiqhelekileyo saseGalician sabasetyhini
2.2 Impahla eqhelekileyo yamaGalikhi yamadoda
3 Isetyenziswa nini ingubo yengingqi yaseGalician?
Imbali encinci yempahla yesithili saseGalician
Iqela lomculo elinxibe isinxibo sommandla waseGalician
Kunzima kakhulu ukuthetha ngemvelaphi yesinxibo esiqhelekileyo seGalicia (apha sikushiya inqaku malunga noko iindawo ezintle kulo mmandla). Kodwa babuyela emva kwiinkulungwane ezininzi. Abemi bemimandla yasemaphandleni baxelisa ilokhwe yookhokho babo bayigqithisela kwinzala yabo.
Ngapha koko, le mpahla khange iqale ukufundwa de kube phakathi kwinkulungwane ye-XNUMX, xa Ukuthandana yavuselela umdla kwizithethe zomthonyama zeedolophu. Iziphumo zoku yaba Umbutho wabantu baseGalician, Yenziwe ziingqondi ezifana UEmilia Pardo Bazán o UManuel Murguia ukuvuselela izithethe kunye nenkcubeko yamaGalikhi.
Phakathi kwemisebenzi yayo yayikukusekwa kweekwayala zengingqi ezazifuna ukunxiba iimpahla eziqhelekileyo. Kungelo xesha apho kwenziwa iinzame zokufumana kwakhona isinxibo sommandla waseGalician. Ngelo xesha, yayisele ithathelwe indawo ziimpahla zangoku ezingaphezulu zamalaphu ahlukeneyo ayenziwe ngentshukumisa ye KwiShishini loPhuculo. Kwakudingeka ke ngoko ukuba kwenziwe uphando.
Kwafunyaniswa ukuba isinxibo esiqhelekileyo seGalicia sibuyele umva, ubuncinci, kwi XVII kwinkulungwane, njengoko yavela kumaxwebhu ahlukeneyo. Phakathi kwezi, imisebenzi yokubhala apho iilokhwe zomtshato kunye nelifa zidwelisiwe. Kwaye kwabonwa ukuba, ngalo maxesha, yayingabo hanziyo okanye ngaphezulu kwendawo ephawule imfashini kwaye nokuba, ngempahla, iimeko zabo bazinxibileyo zibonisiwe. Umzekelo, bekukho iitshefu zezikhalazo, izikethi zabasetyhini abatshatileyo okanye abangatshatanga, kunye needengue xa ungabikho.
Kwelinye icala, ezo zinxibo zommandla zenziwa ngoboya okanye amalaphu elineni afumana amagama ahlukeneyo ngokwenziwa okanye imvelaphi yawo. Ke, ipicote, estameña, isibane, nazcote, isanel, tsala okanye baeta.
Njengoko besikuxelele, onke la malaphu enziwe lula kwi-Industrial Revolution kwaye ngeli xesha iimpembelelo zezixeko zaziswa kwisuti. Kwangokunjalo, ubugcisa bokunikezela babunikeza indlela kwiiwekhishophu zokuthunga kwaye, ngayo yonke le nto, bekukho ukumiswa komgangatho okuqhubekayo yesinxibo sommandla waseGalician osaseleyo unanamhla.
Isinxibo sommandla waseGalician wabasetyhini kunye namadoda
Nje ukuba senze imbali encinci, siza kuthetha nawe malunga nezambatho ezenza isinxibo samaGalikhi esiqhelekileyo sabasetyhini kunye nesabantu. Siza kubabona ngokwahlukeneyo, kodwa kuyathakazelisa ukuba uyazi ukuba ezinye ziqhelekile kwisini nesini.
Isinxibo esiqhelekileyo saseGalician sabasetyhini
Isinxibo sommandla waseGalician wabasetyhini
Izinto ezisisiseko kwimpahla yemveli yaseGalician yabasetyhini yile isiketi esibomvu okanye esimnyama, ifaskoti, umkhuhlane wedengue kunye nesikhafu. Malunga neyokuqala, ikwabizwa ngokuba yisaya okanye basquiñaMde, nangona kunganyanzelekanga ukuba uchukumise umhlaba kwaye, ukongeza, kufuneka ujikeleze unesiqingatha esinqeni.
Ngokwenxalenye yayo, ifaskoti ibotshelelwe esinqeni ngaphezulu kwesiketi. Ngokubhekisele kwitshefu okanye iphaneli, isongelwe kwisiqingatha ukufumana imilo engunxantathu kwaye ibotshelelwe entloko eziphelweni zayo. Ukongeza, inokuba yimibala eliqela kwaye, ngamanye amaxesha, ibekwa umnqwazi okanye ikepusi kuyo, efanayo, kodwa encinci.
I-Dengue ifanelwe ukukhankanywa ngokwahlukileyo, kuba yenye yezona zinto zixhaphakileyo kwisinxibo sommandla waseGalician. Sisiqwenga selaphu esibekwe ngasemva kwaye iziphelo zaso ezimbini zidlulisiwe esifubeni ukubuyela umva kwaye ubophe kwakhona ngasemva. Ngokwesiqhelo, ihonjiswe nge-velvet kunye neerhinestones. Ngaphantsi komkhuhlane wedengue, ufumana Ihempe emhlophe nge-neckline evaliweyo, imikhono ekhukhumeleyo kunye neeplati ezicociweyo.
Izihlangu, ezibiziweyo umbona o imitya Zenziwe ngesikhumba kwaye zineentende zomthi. Ngabo, iimpahla ezisisiseko zempahla eqhelekileyo yaseGalikhi yabasetyhini igqityiwe. Nangona kunjalo, ezinye izinto zinokongezwa.
Yimeko ye Yigcine, eyi-apron enkulu; ye refaxo, ethi yona ibekwe kwiipitikoti kunye popolos, uhlobo lwempahla yangaphantsi ende efikelela emadolweni kwaye iphele ngentambo. Kunokuthethwa okufanayo itshali, itshefu enamacala asibhozo, ye umbhobho okanye imithombo yeendaba, ukusuka Iphindwe kabini kunye ibhatyi. Okokugqibela, ifumana igama lika udoti iseti yezihombiso ezixhonywe esifubeni kwaye zigqibe iinkcukacha zesuti.
Impahla eqhelekileyo yamaGalikhi yamadoda
Umbhobho unxibe isinxibo sommandla waseGalician wamadoda
Ngokwenxalenye yayo, isinxibo esiqhelekileyo saseGalicia samadoda siqulathe ikakhulu imilenze emnyama, ibhatyi, ivesti kunye nekepusi. Eyokuqala luhlobo lweebhulukhwe ezifikelela emadolweni. Ngamanye amaxesha ziyancediswa ngu imilenzeKwakhona iileggings, kodwa eziya zisuka kwindawo yokugqibela yomzimba ziye ezihlangwini. Le yokugqibela yavela ngenkulungwane ye-XNUMX ukubuyisela isitokhwe, nangona zisasetyenziswa nangoku.
Ngaphantsi kweebhulukhwe, unokunxiba cirola. Sisambatho sangaphantsi esimhlophe esikrobe phantsi kwaso okanye esifakwe kwigayita ebotshelelwe emlenzeni ngentambo.
Ke yona ibhatyi, inxitywe ngokufutshane kwaye ilungisiwe. Ikwanemikhono emxinwa kunye neepokotho ezimbini ezithe tyaba. Ngaphantsi kwayo, a camisa nangaphezulu kwe- vest. Kwakhona, esinqeni kuhamba faixa okanye ibhanti, ejikeleza amatyeli amabini, ineenquma kwaye inokuba nemibala eyahlukeneyo.
Okokugqibela, imontera o monteira Sisigqoko esiqhelekileyo sesinxibo sommandla waseGalician wamadoda. Kuyilo lwayo, ingqamana negama layo lase-Asturian kunye nemvelaphi yayo ibuyela kumaXesha Aphakathi. IGalician yayinkulu kwaye ingunxantathu, nangona bekukho neendlebe kwiintsuku ezibandayo.
Kwangokunjalo, i-montera yayihlala inxiba amanquma kwaye, njengentshisakalo, siza kukuxelela ukuba, ukuba baya ngasekunene, lowo uyinxibileyo wayengatshatanga, ngelixa, ukuba babonakala ngasekhohlo, wayetshatile. Ixesha elingaphezulu, iye yaya kwi itshopi okanye iminqwazi, esele yenziwe yaziva, esele iluhlobo lwe-beret kwindawo yeVigo (nantsi unayo inqaku malunga nesi sixeko).
Kwelinye icala, nangona sele iwele ekusetyenzisweni, bekukho enye into enomdla kakhulu kwimpahla eqhelekileyo yaseGalikhi. Sithetha nge coroza, ikapa eyenziwe ngeendiza ezazisetyenziswa ngeyona mihla ibandayo yonyaka.
Isetyenziswa nini ingubo yengingqi yaseGalician?
Iminyhadala yeArde Lucus
Nje ukuba uyazi impahla eqhelekileyo yaseGalicia, uya kuba nomdla ekwazini ukuba isetyenziswa nini. Ngokusengqiqweni, kwiminyhadala yeedolophu zeGalicia kukho abantu abanxibe ezi zinxibo.
Ngokwesiqhelo, bayinxalenye yeokhestra zesintu ezinamalungu omoya kunye neengoma zomculo. Ngokubhekisele kusapho lokuqala lwezixhobo, iitoliki ze Umbhobho we-bagpipe, nokuba basebenza bodwa.
Esi sixhobo sesenkcubeko enzulu yelo lizwe, ukuya kwinqanaba lokuba yenye yeempawu zayo. Ngesi sizathu, umpompi wayengenakuqondwa ngaphandle kwesinxibo esiqhelekileyo seGalicia. Kuyinyani ukuba i-bagpipe ikwayinto esisiseko kwimbali yase-Asturian nakwimimandla yase-Bierzo nase-Sanabria, kodwa iGalician inomahluko othile.
Ngayiphi na imeko, bobabini abagqithisi kunye nabadlali beengoma kunye nabadanisi bahlala benxibe isinxibo sommandla waseGalician. Kwaye bakho kwimibhiyozo ephambili yelizwe labo. Umzekelo, abasileli kwi imithendeleko yoMpostile uSantiago, hayi kuphela umxhasi weGalicia, kodwa nayo yonke iSpain.
Ngokunjalo, bahamba ngezitalato zaseLugo ngexesha le Imibhiyozo yaseSan Froilán kwaye avele kwimibhiyozo yePasika efana naleyo Nursery y UFerrol, bonke babhengeze umdla wabakhenkethi. Uyakwazi nokubabona aba toliki benxibe isinxibo esiqhelekileyo saseGalicia kwimibhiyozo engahambelani kangako nenkolo.
Umzekelo, kuqhelekile ukufumana iibhendi zombhobho kwi U-Lucus uyatsha, apho abantu baseLugo bekhumbula ixesha labo elidlulileyo lamaRoma; kwi UFeira Franca of Pontevedra, ngokusekwe kwixesha elidlulileyo lesixeko, okanye kwi Ukuhamba uhambo lweCatoira Viking, esikhumbuza ukufika kuloo dolophu yamajoni aseNorman ukuphanga indawo leyo.
Ukuhamba uhambo lweCatoira Viking
Okokugqibela, inani labantu elinxibe isinxibo sommandla waseGalician kwiminyhadala ye-gastronomic likhulu kakhulu. Kunyaka wonke baninzi kulo mmandla wonke. Kodwa siza kukuqaqambisela odumileyo Umnyhadala wokutya kwaselwandle ibibanjelwe kwidolophu yase-O Grove rhoqo ngo-Okthobha, kwaye ingwane, eyenzeka eCarballino ngeCawa yesibini ngeyeThupha. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwale cephalopod kumiliselwe eGalicia kangangokuba, phantse zonke iindawo zinombhiyozo wazo wesisu osekwe kuyo kunye nabemi bayo benxibe iimpahla eziqhelekileyo.
Ukuqukumbela, siqwalasele i Isinxibo sommandla waseGalician eyamadoda neyabafazi. Siye sayigqitha ngembali yayo kunye nezinto zayo zemveli ekugqibeleni ukukubonisa apho ungayibona rhoqo. Ngoku kufuneka uhambe kuphela uye eGalicia kwaye uyayixabisa bukhoma.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Isinxibo sommandla waseGalician
Unxiba njani eDubai